जय गुन्द्रुक : लघुकथा - Lekhapadhi साहित्य/कला : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी २६ माघ २०७७, सोमबार १४:४३ मा प्रकाशित
ढिलै भएपनि आफ्नो पढ्ने रहर तिब्र हुनाले म कलेज भर्ना भएँ । छोरो सानै थियो छोरी कलेज जान्थि ।
दिउसोको पढाई भएपनि अन्तरिक परीक्षा भने बिहान आठ बजेबाट एघार बजेसम्म हुन्थ्यो। छोरीको भने जाँचको तयारी बिदा थियो । भान्छामा छिर्न मरिजाने छोरीलाई खाना बनाउन कर लाग्यो । एघार बजे परीक्षा सकेर बाहिर निस्कदा भोकले थाल नै निलूँ जस्तो हुन्थ्यो ।
भोकको झोकमा निक्कै मीठो लाग्यो । नलागोस् पनि कसरी ? माईती टाढा हुनाले एकछाक अरुले पकाएर दिएको खान पनि रहरै थियो ।
कतै न भुली म फटाफट घर आएँ । कपडा नै नफेरी हात गोडा धोएर सिधै भान्छा तिर गएँ ।पहिलो दिन दाल र तरकारीको संयुक्त रुप गुन्द्रुक पाकेको थियो । मैले चिसै खाना खाएँ । भोकको झोकमा निक्कै मीठो लाग्यो । नलागोस् पनि कसरी ? माईती टाढा हुनाले एकछाक अरुले पकाएर दिएको खान पनि रहरै थियो । त्यसरीनै अर्को दिन पनि घरमा गुन्द्रुक पाक्यो ।
मन मनै सोच्दथ्याॅ, अर्को तिहुन पकाएनि हुन्थ्यो भनेर, तर त्यही पनि नपकाउली भनेर मुख खोलिन । मुखलाई मीठो भएपनि शरिरलाई चाहिने सम्पूर्ण तत्व त मिल्ने थिएन गुन्द्रुकमा । उसको पनि परीक्षा आएकोले ऊ पढाईमा नै ब्यस्त हुन्थि। अर्को मनले लाग्थ्यो, आधा घण्टा कस्सिएर पकाउने भने त दाल तरकारी पनि पाक्छ ।
अर्को दिन गुन्द्रुकको पोको डब्बा डब्बीको पछाडी लुकाएर गएँ । त्यो दिन पनि गुन्द्रुक नै पाक्यो ।
अर्को दिन गुन्द्रुकको पोको डब्बा डब्बीको पछाडी लुकाएर गएँ । त्यो दिन पनि गुन्द्रुक नै पाक्यो । अब त अतिभो भनेर मैले पोको पल्तिर देउरानिको घरमा लगेर लुकाएँ।
परीक्षा सकियो घर आएँ । गेट देखिनै मीठो प्याजको हरर बास्ना आयो । आज त मुख फेरिने भयो भनेर मुख मिठ्याउॅदै के पस्न लागेकी थिएँ छोरीले भनि, – “बुढी माउ केही चिज पनि ठेगानमा राख्नु छैन, काकी पनि बिहानै माईत जानु भएको रहेछ काकासंग एक कचौरा मागेर ल्याएँ।”